अपाङ्गतालाई पुनस्र्थापना गर्न माग – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अपाङ्गतालाई पुनस्र्थापना गर्न माग
२०७१ फाल्गुन ६, बुधबार ०४:०० गते
भरतपुर । नवलपरासीको गैँडाकोटकी लक्ष्मी अधिकारी १५ वर्षको उमेरमा कक्षा ९ मा पढ्दै थिइन् । उनको पढाइ पनि राम्रो थियो । एकदिन उनी घाँस काट्न रुखमा चढ्दा लडिन् र सुरू भयो स्पाइनल इञ्जुरी । लक्ष्मी अहिले ३५ वर्षकी भइन् । उनको स्पाइनल एड एन्जुरी टि–१२ र एल–१ फ्याक्चर भएको छ । उनको शरीरको ढाडबाट तलको अङ्ग चल्दैन । लक्ष्मी भन्छिन्, ‘हुने हार दैव नटार’ भनेझैं आफ्नो जीवनलाई हार नठानी जसोतसो अगाडि बढाइरहेकी छु ।’ उनले सरकारबाट अहिलेसम्म अपाङ्गता भत्तासमेत पाएकी छैनन् ।
सरकारसँग उनको कुनै अपेक्षा पनि छैन । विगत १२ वर्षदेखि गैँडाकोटकै विजय विकास स्रोत केन्द्रमा काम गर्दै आएकी लक्ष्मी भन्छिन्, ‘सरकारले दिने भए पो अपेक्षा गर्नु !’ अविवाहित अधिकारीको घरमा ६ जना परिवार छन् । जोसिलो ढङ्गमा लक्ष्मीले भनिन्, ‘सरकारको भर परेको भए म अहिलेसम्म घरमै ह्वीलचियरमा बस्नु पथ्र्यो, तर अहिले म सबल मानिससरह जीवनयापन गरिरहेकी छु ।’
यस्तो समस्या उनलाई मात्र होइन । चितवन भरतपुरको गणेशस्थानकी निशा सुनारलाई सानोमा एक्कासी क्षयरोग देखा प¥यो । सामान्य उपचारपछि ठीक भएको महसुस भयो । पछि कलेज पढ्न जाँदा साइकलबाट लडिन् । उनलाई सामान्य चोट लागे पनि सामान्य उपचारले ठीक भएन । डाक्टरले क्षयरोग भएको बताए । क्षयरोगको औषधी सेवन गर्दा उनको छाला कालो भयो । र, उनलाई ०५७ सालदेखि स्पाइनल इञ्जुरी भयो । उनको पनि शरीरको कम्मरभन्दा तलको भाग चल्दैन । शरीरको कम्मरमुनिको भागमा चोट लागे पनि केही थाहा हुँदैन ।
उनको पैतालामा दुई पटक सियो गडिसक्यो । एकपटक त अपरेशन नै गरेर निकाल्नु प¥यो । निशाले सरकारबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिइने रातो कार्ड पाउनुपर्ने हो, तर उनले अहिलेसम्म पाएकी छैनन् । उनले त निलो कार्ड पाएकी छिन् । जसको अर्थ हुन्छ, स्पाइनल इञ्जुरी ।
सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएकी निशाले सरकारलाई नै चुनौती दिएर टेलर पसल खोलेकी छन् । उनले १२ जनालाई रोजगारी दिएकी छन् ।
लक्ष्मी र निशाजस्तै स्पाइनल इन्जुरी भएका धेरैले आ–आफ्नै पीडा व्यथा सङ्गालेका छन्, तर पनि उनीहरुले सरकारबाट सहयोगको साथ समेत पाउन सकेको छैन । चितवन जिल्लामा मात्रै स्पाइनल इन्जुरी भएका तीन सयभन्दा बढी छन् । स्पाइनल इन्जुरी भएका झण्डै ९५ प्रतिशतमा आत्मग्लानि हुने गरेको छ । उनीहरुलाई आत्मग्लानि हुनबाट जोगाउने एउटैमात्र उपाय छ, त्यो हो पुनस्र्थापना ।
चितवनमा दुई वर्ष अघिबाटमात्र भरतपुर अस्पतालमा पुनस्र्थापना केन्द्रको सुरूवात् भएको हो । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. केशवराज भुर्तेल अस्पतालमा रहेको स्पाइनल इन्जुरी पुनस्र्थापना केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न लागेको बताउँछन् । करिब १० करोड रूपैयाँको लागतमा ५० शैया क्षमतासहितको नयाँ भवन बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
आर्थिक स्रोत जुटाएर पुनस्र्थापना केन्द्रको विस्तार गर्न सरकारसँग पहल थालिएको डा. भुर्तेलले बताए । ०६९ असार ५ गतेदेखि सुरू भएको केन्द्रलाई पाँच शैयाबाट हाल बाह्र शैयाको बनाइएको छ, जुन चितवनका लागि पर्याप्त छैन । चितवनमा ५० शैयाको आवश्यकता भए पनि हाल यसले मात्र काम चलाउनु परेको छ ।
ढाडभित्रको हड्डी अर्थात् स्पाइनल इन्जुरी भएकाहरुको उपचारका लागि केन्द्र सञ्चालनको लागि आर्थिक सङ्कलन गर्न अस्पतालले आगामी माघ महिनामा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गर्न लागेको छ । हाल २३ जिल्लाका स्पाइनल इन्जुरी भएकाहरु भरतपुर अस्पतालमा रहेका छन् । स्पाइनल इन्जुरी भएकाहरुले सार्वजनिक स्थल अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने र सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अपाङ्गमैत्री सामाजिक संरचना तथा सरकारी कार्यालय नभएका कारण विभिन्न समस्या झेल्नु परेको उनीहरुको दुखेसो छ ।